ZOTRA FAHA-8 MAHAJANGA : Miandry ny fijanonana lava hiantsenan’ny vadin’ny mpamily ny mpandeha
Tena manomboka efa manaotao foana araka izay mety amin’ny sain’izy ireo ny mpitatitra sasany ao amin’ny zotra faha-8 izay mampitohy any Hasima sy ny Croisement cimetière iny. 19 septembre 2018
Anisan’ireo tranga iray nampiteraka fimenomenomana teo amin’ireo mpandeha, ity tranga iray izay tena tsy nisy fanajana ireo mpanjifa ity. Mpamily iray izay niainga avy teny amin’ny Sotema nihazo an’i Mahabibo no nanao izany fihetsika izany. Anisan’ireo mpandeha tao anatiny ny vadiny.
Gaga sady sorena ireo mpandeha fa isaky ny mahita ireo entana tokony hovidiany eny an-dalana ilay ramatoa dia tsy maintsy mijanona ny mpamily. Nisy efa ho inefatra teo ho eo izany fihetsika izany ary tsy amin’ny toerana fiantsonana akory. Farany, nisy tsy nahazaka izany fihetsika izany ireo mpandeha ka nanaitra ilay mpamily. Valy boraingina anefa no setrin’izany izay nilazany fa « vadiko io ».
Teo vao taitra tamin’ny fihetsik’izy ireo ny mpandeha rehetra. Manararaotra miaraka amin’ny vadiny ramatoa rehefa hiantsena, ka terena hanaraka ny sitrapon’izy roa ny mpandeha rehetra. Tsy mba tamin’ny toerana iray mantsy izy no nidina fa tamin’ny toerana rehetra izay nahitany zavatra hovidina.Tena tokony mba hojeren’ireo lehiben’ny kaoperativa ihany ny tranga tahaka izao fa lasa manimba ny hafa ny fihetsika tsy fanomezana hasina ny mpandeha.